Kuphela kusemhlabeni apho imbewu inokuhlakulela kwaye ivelise iziqhamo zayo ekuhambeni kwexesha. Kuphela ngeli xesha emzimbeni unokukhathalela isambatho esenziwe ngaphakathi apho iya kuhlala ingafi.
Awukangeni na umendo okhokelela ekukhanyeni? Emva koko kuza into eqhubeka phambili, kude kungabikho nto ime phakathi kweNyaniso engatyhilelwanga kuwe.
Vol. 2 I-OCTOBER, 1905. 1
KWIMijikelezo yenkolo ethandabuzekayo, yokwembongi, okanye yemvisiswano engaqondakaliyo, kuye kwakholelwa kwaye kucingwe ngabantu abaneminqweno kunye neemvakalelo ezivuselelweyo kunye nezikhuthazayo, ukuba umphefumlo ngamnye ongafundanga kufuneka ujonge iqabane lakhe kwelinye icala lesini ukuba lingaphumelela yehlabathi, okanye yenza inkqubela ngokomoya. Ngapha koko, kwaye ngesizathu soko, kuthiwa umphefumlo wawukhe wawukho, kodwa ngenxa yesono samandulo esahlukanisiweyo njengendoda nebhinqa-kungoko kukho usizi kunye nokulangazelela kobomi obahlukeneyo bomntu. Ukuba, emva kokuhambahamba kwawo emhlabeni, ngenxa yokuxolelwa kwesono sawo, umphefumlo ekugqibeleni uyakufumana "iqabane" okanye "elinye icala," kwaye emva koko ungene ngelo xesha lonwabo olugqibeleleyo ukuze waziwe ngumphefumlo kuphela umphefumlo. Zininzi izinto ezahlukeneyo ngokwahluka kwengqondo yomphefumlo. Iya kuvumela umdlalo opheleleyo kumbongo wesixhomi, kwaye iya kuzixhasa kwimfihlakalo; kodwa yimfundiso ekhokelela kwiziphumo ezingonwabisiyo. Ukuba ucamngca ngayo kuya kwenza ukuba ingqondo ijongeke okanye ilangazelele “iqabane lomphefumlo,” kwaye, ngokomthetho wokubonelela kunye nemfuno, omnye uzokuza. Kodwa, "iqabane" linokuba sele linawo amaqhina asekhaya anokuthintela inkolelo enjalo. Ngamaxesha athile, abantu ababini abazifumana bavumelekile omnye komnye kufanelekile ukuba nengxelo yomphefumlo wamawele ukuphendula ngendlela abavakalelwa ngayo, kwaye baxele ukuba enye nenye kufuneka yenziwe enye, kwaye njengoko imiphefumlo yabo ingamawele, kufuneka beyinto enye nenye. Xa eli nqanaba lokukholelwa kufikelelwe kwisigculelo sele ngokuqinisekileyo uqinisekile ukuba ulilandela. Ke “amaqabane omphefumlo” avakalisa ukuba aqondwa kakuhle kwaye atshutshiswa kwaye sonke siphila phantsi kweemeko zobuxoki. Kodwa abaninzi, ekuqaleni bebeqinisekile ukuba bafumene "amaqabane omphefumlo," baye banesizathu kamva sokuba babenqwenela. Imfundiso ebizwa ngokuba ngabafazi bokomoya lelinye igama lale ngcinga.
Le mfundiso yamawele-miphefumlo yenye yezona mfundiso zikhohlakeleyo kuyo nayiphi na iminyaka. Izama ukwehlisa umphefumlo ukuba uyihlanganyele kwisondo, kungaphula iminqweno yosapho ukwanelisa inkanuko yesilwanyana, kwaye iyafihla inkanuko yenyama phantsi kwengubo yokomoya.
Amawele omphefumlo ngumbono ogqwethiweyo othatyathwe kwimbali yobugqi bamandulo. Kwathethwa ngabo ukuba, kwasekuqaleni, ubuntu abuzange bunjengoku-bahluleke kwimizimba eyindoda nebhinqileyo-kodwa ukuba uluntu lwelo xesha libandakanya izini zombini ngesini esinye, ukuba ezi zidalwa zazinamandla afana nezo zithixo; kodwa emva kwethuba elingenakubalwa ugqatso lwendoda-umfazi baba ngamadoda nabafazi bomhla wethu kwaye, bahlukane, baphulukana namandla ababekade eyabo.
Abantu bakudala bayibhale phantsi imbali yexesha labo elidlulileyo, abo baya kuyifunda bayintsomi kwaye banike uphawu.
Kodwa kungcono kuba iqinisekile kunembali okanye intsomi, umzimba womntu ugcina izinto ezenzeka ngalo lonke ixesha.
Umzimba womntu ekukhuleni kwakhe utyhila kwaye utyhila iingxelo zangaphambili.
Ukusukela ekusekweni kobuntu ukuya kweli xesha langoku, imbali yalo icacisiwe kuphuhliso lomntu ngamnye. Kwaye ngaphezulu, isiprofetho sexesha elizayo siqulathwe kuphuhliso lwangaphambili.
Uphuhliso lwe-embryological lubonisa ukuba kwinqanaba lokuqala le-fetus ngaphandle kwesondo; kamva, nangona kungabikho sini kubonakala ngokucacileyo, ukuba ngokwenyani iyabelana ngesondo; Kusekuhambeni kwexesha, ukuze kuthiwe ngowasetyhini. Iba ngamadoda kuphela kuphuhliso lwayo lwamva nje. I-Anatomy ikwabonisa le nyaniso ibalulekileyo: ukuba emva kokukhula okugcweleyo nokuba kungokwesondo kusele kugcinwe emzimbeni ngamnye amalungu akhethekileyo esini esahlukileyo. Kuyenzeka ukuba ekukhuleni komntu obini-ngesondo umntu obhinqileyo aboniswe kuqala.
Umzimba womntu ngumfuziselo nomphetho wamanqanaba amane ahlukileyo kwindaleko, inqanaba ngalinye eligubungela ixesha elikhulu. Icala lomzimba ngokwamanqanaba ngoku limelwe kuthi zizimbiwa, imifuno, izilwanyana, kunye nomhlaba wabantu. Kwimbiwa, ifom kuqala kuqala ukubonakala kwidipozithi yokuqala, kodwa kamva, ngokusebenza ngaphakathi ngaphakathi, kunye nentshukumo yamandla ombane, owaziwa kwisayensi ngokuthi "ubudlelwane bemichiza, uhlobo lwekristalu egqibeleleyo luphuculwe. Ngezigaba zokuqala zefom kule mineral, ubomi buqala ukubonakala kwinqanaba lesibini kwaye bubonwa kwiimpawu zokuqala zobomi besityalo, kodwa kamva, ngoncedo lwamandla ombane ngokukhula nokukhula okuvela ngaphakathi kwesityalo, ubomi -Icell iphuhlisiwe kwaye yabekwa ngaphandle. Le nkqubo yaziwa kwibhayoloji nakwiphysology njengenkqubo “yokuqunjelwa.” Ngexesha lokukhula kobomi bezityalo, umnqweno ubonakaliswa kuqala ngokuphuhliswa kobomi ngaphakathi kweseli yobomi, ukusuka apho kamva, ngokwanda kobomi kunye Umtsalane womnqweno, isilwanyana-iiseli ziphuhliswa kwaye zahlulahlulwe zangaba zimbini iiseli ezilinganayo, zombini zinempawu ezifanayo. Eli nqanaba lesithathu libizwa ngokuba "lisahlulo seseli." Ekuphuhlisweni kweli nqanaba lesithathu, isilwanyana-kubonakaliswa isini kwaye sifuna umanyano lweeseli ezimbini zesini esahlukileyo ukusasazeka, njengoko ingasenakho ukuqhubeka nokudalwa kwendalo ngokuthi ”Kuphela. Ngokukhula kwesondo esilwanyaneni, inqanaba lesine lomntu liqala xa intsholongwane yengqondo ibonakaliswa ngaphakathi kwiseli-yesilwanyana, kwaye iqhubekeke ibonakale kwimo yomntu, ethi iphuhliswe nangakumbi ukukhula komzimba.
Amanqanaba amane ophuhliso abonisa ukwanda kwemizimba esinayo ngoku. Imizimba yexesha lokuqala elikhulu yayinokubonakala kokubonakala kwekristale kwaye yayingaphantsi kunelanga. Ngaphakathi kwindawo yecrystal yayiyinto efanelekileyo yendoda ezayo. Abantu bobugqatso babanele ngokwabo. Abazange bafe, kwaye abasayi kuze bayeke ukuba kude kube kunjalo njengoko indalo iphela iya kuhlala, kuba zibonisa iifom ezifanelekileyo emva kokuba zonke iifom zenziwe kwaye ziya kwakhiwa. Ukuqala kwexesha lesibini kuphawulwe njengokubukeka okwekristale okweli xesha lokuqala kuzisa i-oales ye-opalescent okanye eyifana neqanda; Ngaphakathi kwimo enjengeqanda iqulathe iintsholongwane zobomi ezazibizwa ngokuphefumla kwinqanaba lesikristali, kwaye ifom-iqanda ifom, yavuselela into elula yokubonisa. Olu gqatso lwesibini lwabantu luzikhulise ngokwalo ngokuvelisa iifom ezifanayo nezo zabo bume bazo, kodwa zibe ngaphakathi kwe-fomu-yefom-efana ne-loop engaphezulu, ngokubonakala ngathi sisangqa esijikeleze imbonakalo ukuze iphantse yabonakala ngathi ilayini ngqo. Umdibaniso ngamnye wazidibanisa kunye kwaye wanyamalala kuhlobo owawukhuphe kuwo. Ixesha lesithathu laqala ngeefom ezinje ngeqanda ezathi zavela. Uhlobo olufana neqanda luyekisiwe luphawu olucekeceke lwaba zizitho zangokwesini esinye, indoda nebhanti emzimbeni omnye. * Umnqweno wavuswa kolu gqatso lwabantu abathandana abathandanayo abathandanayo kwaye abanye baqala ukukhupha amandla abo . Ukusuka kubomi kunye nakwindlela yokwenza amandla ngaphakathi, oku kuxhotyiswa, kwaye, kwinto ekwimo yomntu ngoku i-umbilicus, ikopi yefom ekhutshiweyo ngokuthe ngcembe kwaye iqiniswe ibe kwifom efanayo naleyo yayikhupha kuyo. Ekuqaleni oku kwenziwa kuphela ngabambalwa, kodwa ekugqibeleni ugqatso balandela umzekelo wabo. Amacangci anjengekristale agqobhoza abanye ababevelise kuqala. Olu luhlanga olungenakulinganiswa nanto oluhlala njengabafundisi boluntu. Abanye bafa, kodwa baphinda babonakala kwinzala yabo. † Imizimba ke eye yaveliswa yaba denser kwaye icompact ngakumbi kwaye kwixesha lokuqala yaqala ukuba nolunye lwezesondo oluthe kratya kunolunye, de ekugqibeleni bangabi namandla amandla kwaye bavelisa, ngokwayo, njengoko amalungu esini engalawuleki esiya esiba krakra. Ke into nganye emanyeneyo nenye yabelungu kwaye yavelisa ubuhlanga bamadoda nabafazi njengoko sibazi ngoku.
Kwithuba lokuqala lophuhliso ugqatso lwekristale-enje yanika impembelelo yokuzivelela kwezinto abazidalileyo, kodwa bahlala ngaphandle kwayo yonke into eyalandelayo de aba bafazi babelana ngesondo baqala ukukhulisa. Ke i-crystal-like sphere zigqunywe kwaye ziphefumla ngemizimba eveliswa yimanyano yomzimba. Ukususela ngelo xesha iminyaka idlulile, kodwa iipali zekristale ziye zahlala zinxibelelana noluntu ngengqondo. Kubo ingqondo iphila emzimbeni, kwaye kwingqondo umzimba uthatha iphinde ibuyele ukubunjani bayo. Ngokudibana kwengqondo ngamanqwanqwa anjengekristali eluntwini icetyelwe ukuba ingabinakho ukubuphila ubomi obungenakufa, njengoko kwakunjalo kwizinto zangaphambili.
Yonke le nto inokubonakala ingaqhelekanga kwabo bayivayo okokuqala, kodwa oko akunakunceda. Iya kubonakala iyinto engaqhelekanga ukuba ucamngca kwaye ufundwe kukukhanya kofaniso lwe-embryological kunye nokukhula komzimba. Njengoko ukufundisisa kunye nokucamngca kuqhubeka kuqhubeka isicwangciso siya kuqondwa.
Inzululwazi yesini kukwazi ukuvelisa eyona mizimba igqibeleleyo. Ifilosofi yezesondo kukwazi iinjongo zemizimba kunye nokuzisebenzisa. Inkolo yesini kukukhokelela kubomi obukrelekrele ngokobukrelekrele ukuze babe nobunye.
Yintoni uBomi kwihlabathi le-noumenal, isini kwihlabathi elibonisiweyo. Ukwabelana ngesondo yeyona nto igqibeleleyo, ehleliweyo, intetho yoBuntu. Yonke indalo ikho
Isini masibe zizikali okanye izixhobo apho ingqondo ifanele ifunde ukuzilungelelanisa kwaye izilinganise ngokwalo kweli lizwe, kwaye apho imijikelezo yobomi kufuneka ikhokelwe khona ukuba ibe yimo. Kodwa ngomzimba wengqondo, ukuba imizimba ibe neentlobano zesini, isini siguqulwe senziwa umcinezeli onobukrelekrele nengqondo. Ingcikivo ibeke amatywina ayo emntwini, kwaye umntu ubanjiwe emandleni ayo njengamakhonkco esinyithi. Isondo ikhobokile kwaye ngoku inyanzela ingqondo ukuba yenze ngokuchasene neemfuno zesizathu, kwaye agqibelele amandla ayo kangangokuba uluntu njengomkhosi omkhulu ubhaliselwe imfazwe ngokuchasene nesizathu, kunye nemithetho yexesha kunye nexesha, kufuneka ilawulwe. Ukutyeshela le mithetho, izizwe kunye nohlanga ziye zatshona ngaphantsi kwenqanaba lezilwanyana kwaye zadlula phantsi kwamanzi okutsalwa.
Isini yimfihlakalo emelwe ukusonjululwa ngabo bonke abantu abeza kweli lizwe. Kwabo baphantsi kobukhoboka, isondo kufuneka sihlale siyimfihlakalo. Ukusombulula imfihlakalo yesini kukuzikhulula kumakhonkco ayo, kunye nokukwazi ukukhokela imijikelezo yobomi kwiifom eziphezulu rhoqo.
Kwimfihlakalo zakudala kwathiwa i-neophyte yaqalwa kwintsingiselo yala magama mane: Yazi, Dare, Thatha, Thula. Umntu ulibele okanye ulahle indlela eya kumnyango weemfihlakalo. Kodwa intsomi kunye nomqondiso zihlala zingamangqina kwinto yokuba itempile yeZimfihlakalo ngumzimba womntu.
Indoda okanye umfazi kuphela kwesiqingatha sendoda, kwaye umtshato liziko lakudala kakhulu eluntwini. Isini kubandakanya imisebenzi ethile. Umsebenzi wokuqala kunye nowona ubalulekileyo womtshato ngumtshato; hayi umtshato ngenxa yokuzifezekisa kweengqondo, kodwa ngumanyano uluntu oluya kuthi luqhubeke luze lugqibelele ugqatso. Umsebenzi olapha emhlabeni kukuba abantu ababini besini esahlukileyo bafanele badibane babe ngumntu omnye ukuze bavelise uhlobo olugqibeleleyo, oluhlobo olo luya kubandakanya bobabini utata noyise ngaphakathi. Uxanduva kwisimo ngasinye ngokwaso kukuba elowo kufuneka abe ngokulinganayo kwelinye kuvavanyo nakukhathalelo lobomi, njengoko uhlobo lunye lunika esinye isifundo esifunekayo ukujikeleza, ukomeleza, kunye nokuprinta , iyinye iyileyo, ngokuchasene nenye, icala elichaseneyo okanye elingasemva lokuma kwalo. Konke oku kusebenza kwizifundo ezifundwa luluntu kwindlu yesikolo ebizwa ngokuba lihlabathi, kwaye zilungiselelwe abo banokuphila ubomi obonwabisayo emhlabeni.
Ingxaki yesini iqulethe imfihlelo enzulu ngakumbi. Kukho umngcipheko wokuyiqhubela phambili, ngenxa yokuba kunokwenzeka ukuba ungaqondwa kwaye isetyenziswe gwenxa kwisinye sezigaba zembono yomphefumlo wamawele. Le mfihlakalo iya kuba yindlela yokufumana injongo engcwele yomtshato ebisisicatshulwa sokwenyani sokwenyani, seempawu zeRosicrucians, kunye nezithandi zobulumko zamaxesha onke. Kuyinyani, ukuba emntwini kuqulethwe yindoda nomfazi: ukuba ngaphakathi kwendoda kukho umntu obhinqileyo ongowesetyhini, kwaye ngaphakathi komfazi kukho indoda enokubakho. Ugqatso lokuqala oluphambili, nohlanga lwethu olusisiphumo, lusajamelene nomntu ngamnye njengoThixo ongumlinganiswa walo. Uhlobo lobuntu bethu obabubodwa obuphathelele kwisini sobusapho kufuneka luphuhliswe kwakhona ngaphambi kokuba i-ego yaphezulu, i-crystal sphere, inokuthi ibe ngumzimba ngokupheleleyo. Olu phuhliso lunokwenziwa kuphela ngesazela nangobukrelekrele, emva kokuba sifunde izifundo ezifundiswa yimizimba yethu yangoku. Unobangela womtsalane wesondo elinye kwelinye kungenxa yomnqweno wentetho kunye nophuhliso lwamandla achaseneyo nayo ngokwayo, kwaye ngenxa yokuba esinye isini sisicatshulwa sangaphandle kunye nokubonakaliswa kwelinye icala elikuyo ngaphakathi. Umtshato wokwenene wenzeka xa zombini ezi zinto zilungelelene kwaye zimanyene ngokwenyani ngaphakathi. Oku kunokwenziwa kuphela emva kwamava amade kubomi obuninzi nasemva kokuzinikela. Kufundwa yiyo yonke into efundiswa bubomi bomzimba, kwaye emntwini ngoku iyaziwa, ukuba ikhona into engabonelisiyo ubomi bokwenyama. Oku kubangelwa lelinye icala lobuntu elizama ukuzibonakalisa ngokungoneliseki bubomi bokwenyama, ngokuzilangazelela komanyano kunye nobuThixo, ngokuvuma ukunikela ngobomi, ukuba kufanelekile, ukulungiselela ukulunga kwakho okanye okuhle zabanye, ngokulangazelela okomoya okungaphakathi, kunye nokuhluma kothando lokwenyani olusuka kude kuyo nayiphi na into ethandwayo. Icala elingaphakathi lomntu alizukuvela njengazo naziphi na iintlobo zomoya ezintle ezinokuza nezithembiso notshintsho. Ezi ke zezinzwa kwaye kufuneka zigxothwe ngaphandle kwepharley. Imvakalelo yolunye uhlobo lwesini idluliselwa ekubeni ngaphakathi, ophendula njengoko ukuzinikela kubonakalisiwe. Njengoko uzinikelo olulinganiselweyo lunikezelwa kwingcinga nasemsebenzini, ngokufanayo nezinye ziyaphendula ngaphakathi (ungaze ngaphandle) komzimba wenyama. Xa oku kusenziwa ingxaki yesini iya kuba yenziwe ngaphandle. Indoda eza kwenziwa ngayo ayizukudinga ukuzilolongela umzimba wesondo kwakhona kuba amandla okwahlula ngoku aya kube edityaniswe abe lilungu elinye elinamandla kunye nokuvelisa imizimba, ukuba iyavuma, njengoko kusenziwa kugqatso. Ithuba lesithathu, leyo yayiyimodeli yayo.
Phakathi kweenguqu ezibonakalayo ezandulela lo mtshato wokwenene, kukuvuswa kobomi kumalungu athile ngoku (njengepineal gland) kumagumbi engqondo angenasiphelo.
Vumela ingqondo nentliziyo zimiselwe ukufumana isazela esiqinisekileyo esingagungqiyo, kwaye ungabikho kwenye injongo, njengokuphela. Ukufikelela imeko yethu yangoku yeminyaka yobudala bokukhula kube yimfuneko ekwakhiweni kweminye imizimba. Iminyaka yobudala isenokuba yimfuneko ekwakhiweni kweminye imizimba eya kuthi ibonakalise ngcono kwaye iphendule kulwazi. Ixesha lifutshane kwaye indlela iyaqaqamba ukuba sisazi, hayi umzimba, ukuba siyawufuna. Emva koko sinika wonke umzimba kunye nayo yonke into ixabiso layo elipheleleyo ngenjongo yokuyikhonza. Kuba wonke umzimba uxabisa ngokulinganayo ngokokusebenza kwawo ekufikeleleni engqondweni, kungengenxa yomzimba wayo okanye uhlobo lwayo. Ukuba ke ngoko sinqula ukwazi ngaphezu kwayo yonke enye imizimba yethu iya kuguqulwa ngokukhawuleza kwaye igqatse ukukhanya.
Le yinxalenye yesondo edlalayo ekugqibeleleni kokuqonda.
* Olu gqatso lwabantu lwenziwe lwabaliswa e-Bhayibhileni ngebali lika-Adam-Eva, ngaphambi kokuba batye iapile yolwazi kunye nokuzala abantwana.
Esi sisiphelo sebali lephoenix, intaka engcwele nabantu bakudala. Kuyatshiwo ukuba iphoenix yavela ekuphindeni nganye yomjikelo kwaye iya kuzitshisa esibingelelweni, kodwa iya kuhlala iphakama kwakhona elusukeni lwayo lusencinci kwaye luhle. Koko kwaboniswa ukungafi kwayo-ngokuvela ngokutsha. ibekwe kumthetho wezesondo, kwaye iiseli kwimizimba yethu ziyasebenza ukuza kuthi ga ngoku.